လုံခြုံရေး feature တွေအများကြီးပါဝင်နေတဲ့ Gate Camera Smart Lock | Myanmar Mobile App
Home Trending Gadget လုံခြုံရေး feature တွေအများကြီးပါဝင်နေတဲ့ Gate Camera Smart Lock
လုံခြုံရေး feature တွေအများကြီးပါဝင်နေတဲ့ Gate Camera Smart Lock
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ smart lock တွေကို သူတို့အိမ်အတွက် ရွေးချယ်အသုံးပြုသူတွေ များလာပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သိသာပါတယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်အတွက်လုံခြုံမှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပြီးတော့ feature လည်း စုံလင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း smart lock တိုင်းက အားလုံးအတူတူပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အချို့ဟာတွေက အခြေခံသဘောလောက်ပါပဲ။ အခြားပစ္စည်းတွေကတော့ ပရီမီယမ် feature တွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပြီးတော့ သင့်ရဲ့အိမ်နဲ့ တံခါးအတွက် ကမ္ဘာအသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်ပေးနိုင်စွမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
Gate Camera Smart Lock လေးကတော့ feature တွေ အများကြီးပါဝင်နေပါတယ်။ သူမတူတဲ့ access code တွေနဲ့ ဗွီဒီယို streaming တွေဆိုတာ အစပဲရှိပါသေးတယ်။ motion activated camera ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 720p 150-degree field of view ၊ တံခါးအပြင်ဘက်က live video streaming တွေကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်စေမှာပါ။
Connected Keypad Lock လေးမှာတော့ LED lit keypad lock ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် access code ရှိတဲ့သူတိုင်းကို ၀င်ခွင့်ပေးထားပြီးတော့ သင်နဲ့ဧည့်သည်တွေကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် mobile chime လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့. hysical key cylinder ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် အရင်တုန်းကလိုမျိုး သော့တံနဲ့လည်း ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေနဲ့ real time ဆက်သွယ်ချင်ပါသလား။2way audio feature ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
app လေးနဲ့ဆိုရင် တံခါးဝမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိနေတာနဲ့ အချက်ပြပေးမှာပါ။ စမတ်ဖုန်းကနေ တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ သင်အိမ်မှာမရှိပေမယ့်လည်း သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ သိနိုင်ပါတယ်။ Remote Lock and Unlock feature ပါဝင်လို့ စမတ်ဖုန်းကနေ အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Gate ဟာ တံခါးအတော်များများနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ မိနစ်အနည်းငယ်ပဲ တပ်ဆင်ရမှာပါ။ အရမ်းမိုက်တဲ့ smart lock လေးပါပဲ။
ဒီနခေ့တျေမှာတော့ smart lock တှကေို သူတို့အိမျအတှကျ ရှေးခယျြအသုံးပွုသူတှေ မြားလာပါပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ သိသာပါတယျ။ သူတို့ဟာ အိမျအတှကျလုံခွုံမှုကောငျးကောငျးပေးနိုငျပွီးတော့ feature လညျး စုံလငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး smart lock တိုငျးက အားလုံးအတူတူပဲလားဆိုတော့ မဟုတျပွနျပါဘူး။ အခြို့ဟာတှကေ အခွခေံသဘောလောကျပါပဲ။ အခွားပစ်စညျးတှကေတော့ ပရီမီယမျ feature တှကေိုလညျး ပေးစှမျးနိုငျပွီးတော့ သငျ့ရဲ့အိမျနဲ့ တံခါးအတှကျ ကမ်ဘာအသဈတဈခုကို ဖှငျ့ပေးနိုငျစှမျးတှေ ရှိနပေါတယျ။
Gate Camera Smart Lock လေးကတော့ feature တှေ အမြားကွီးပါဝငျနပေါတယျ။ သူမတူတဲ့ access code တှနေဲ့ ဗှီဒီယို streaming တှဆေိုတာ အစပဲရှိပါသေးတယျ။ motion activated camera ပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ 720p 150-degree field of view ၊ တံခါးအပွငျဘကျက live video streaming တှကေိုလညျး တှမွေ့ငျနိုငျစမှောပါ။
Connected Keypad Lock လေးမှာတော့ LED lit keypad lock ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ access code ရှိတဲ့သူတိုငျးကို ဝငျခှငျ့ပေးထားပွီးတော့ သငျနဲ့ဧညျ့သညျတှကေို ခြိတျဆကျပေးမယျ့ mobile chime လေးလညျး ဖွဈပါတယျ။ စိတျမပူပါနဲ့. hysical key cylinder ပါတဲ့အတှကျကွောငျ့ အရငျတုနျးကလိုမြိုး သော့တံနဲ့လညျး ဖှငျ့လို့ရပါတယျ။ ဧညျ့သညျတှနေဲ့ real time ဆကျသှယျခငျြပါသလား။2way audio feature ကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
app လေးနဲ့ဆိုရငျ တံခါးဝမှာ တဈယောကျယောကျရှိနတောနဲ့ အခကျြပွပေးမှာပါ။ စမတျဖုနျးကနေ တိုကျရိုကျဗှီဒီယိုကွညျ့လို့ရပါတယျ။ သငျအိမျမှာမရှိပမေယျ့လညျး သူတို့ဘာလုပျနလေဲ၊ ဘာတှဖွေဈနလေဲ သိနိုငျပါတယျ။ Remote Lock and Unlock feature ပါဝငျလို့ စမတျဖုနျးကနေ အဖှငျ့အပိတျလုပျနိုငျပါတယျ။
Gate ဟာ တံခါးအတျောမြားမြားနဲ့အဆငျပွပွေီးတော့ မိနဈအနညျးငယျပဲ တပျဆငျရမှာပါ။ အရမျးမိုကျတဲ့ smart lock လေးပါပဲ။
Previous articleတရုတ်နိုင်ငံမှ iPhone အသစ်များတင်ပို့ရန် ကုန်တင်လေယာဉ်များ ငှားရမ်းပြီးစီး
Next article5G iPhone လုပ်ဖို့ Apple ဘာလို အလျင်မလိုတာလဲ